U guuritaanka UNWTO ee Sacuudi Carabiya oo la hakiyay: Xoghayaha Guud Zurab Pololikasvili oo ku jira Dhibaato Weyn?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » U guuritaanka UNWTO ee Sacuudi Carabiya oo la hakiyay: Xoghayaha Guud Zurab Pololikasvili oo ku jira Dhibaato Weyn?
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Wasiirka dalxiiska ee Sacuudi Carabiya Ahmed Al Khateeb. waa dhaq -dhaqaaqa iyo ruxruxa dhabta ah ee dunida dalxiiska, halka xoghayaha guud ee UNWTO Zurab Pololikasvi laga yaabo inuu dhawaan shaqo ka maqnaado.
Dhaqdhaqaaqa xarunta dhexe ee UNWTO waa hakad, laakiin tani sinaba uma aha dhammaadka sheekada.
Dib-u-dejinta Xarunta UNWTO ee Spain oo loo wareejiyay Sacuudi Carabiya waxay heshay dareenka Ra'iisul Wasaaraha Spain Pedro Sánchez iyo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres.
TRa'iisul Wasaaraha Spain ayaa taleefan kula hadlay dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman Al Saud, halkaas oo laga yaabo in tallaabada UNWTO ay ahayd sababta ugu weyn ee loogu baaqayo mustaqbalka xiriirka Sucuudiga iyo Isbaanishka.
Waxaa la yaab leh, Antonio Guterres, Xoghayaha Guud ayaa isaguna ku lug yeeshay. Sanado badan oo cod-bixiyayaal ah oo uu xoghayaha guud ee UNWTO Zurab Pololikasvili waligiis wax ka qabtay, welina waa la iska indho tiray New York. Hadda SG hadda waxay ku lug leedahay ka dib markii ay u digtay dawladda Isbaanishka.
Faragelinta Qaramada Midoobay si loo hakiyo tallaabada UNWTO ayaa lagu guuleystay hadda.
Si kastaba ha ahaatee Spain ayaa hadda go’aansan karta inay ka noqoto taageeradii ay siin jirtay Xoghayaha Guud Pololikashvili.
Sida laga soo xigtay ilo khalkhalgelinta Dib-u-doorashada bisha Janaayo ee Zurab Pololikashvili oo ah xoghayaha guud ee UNWTO ee Guddiga Fulinta ee UNWTO ayaa soo baxaya. Iyada oo la kaashanayo Spain taageerada si xun Xoghayaha Guud ee aan sharciga ahayn ayaa ugu dambayntii soo afjarmi kara.
Dib-u-doorashada Zurab waa in lagu xaqiijiyaa Golaha Guud ee Marooko kahor dhammaadka sannadka. Ma aha Spain oo kaliya, laakiin dalal kale oo badan oo adduunka ah ayaa laga yaabaa inay ka hor yimaadaan dib -u -xaqiijinta Zurab markii labaad, oo ay meesha ka saaraan gebi ahaanba doorashadii 2018.
eTurboNews rwuxuu si aad ah u soo sheegay in Xoghayaha Guud ee UNWTO uusan runtii si habboon oo sharci ah loogu dooran xilligiisii ​​2018 ee hadda.
U guuritaanka Xarunta UNWTO ee Sucuudiga
In kasta oo tallaabadani aysan weli ahayn codsi rasmi ah oo ka yimid Sucuudiga, haddana weligeed qoraal looma soo bandhigin Dowladda Spain, ama UNTWO, Sacuudi Carabiya si firfircoon oo cad ayay uga qayb qaadatay in tallaabadan la gaaro.
Waxay u muuqataa in Zurab Pololikashvili uu Sucuudiga u xaqiijiyey taageeradooda. Waxa kale oo uu ballan qaaday inuu taageeri doono Spain. Tweets-ka uu soo dhejiyay Zurab oo muujinaya taageerada uu u hayo Spain ayaa la tirtiray si loogu jahwareero mawqifkiisa laba-geesoodka ah ee arrinta.
eTurboNews wuxuu gaadhay dhawr wasiir oo dalxiiska adduunka ah. Dhammaantood waxay isku raaceen inay u codeyn lahaayeen u -guuritaanka Sucuudiga, waxayna bogaadiyeen taageerada uu Sacuudigu siiyay dalxiiska adduunka.
eTurboNews Wadahadallada tooska ah iyo kuwa aan diiwaanka ahayn ee lala yeeshay wasiirrada, kaalmooyinka iyo mas'uuliyiinta kale waxay si cad u xaqiijiyeen taageerada weyn ee codbixintaas.
Waxay kaloo xaqiijisay heerka sare ee jahawareerka dalalka xubnaha ka ah UNWTO ee hadda.
Sababtoo ah faragelinta Qaramada Midoobay, ayaa laga yaabaa in tallaabadan HQ la hakiyo in muddo ah, laakiin wada xaajoodka iyo doodda hareeraheeda ayaa u muuqata inay sii socoto.
Waxa kaliya oo la rajayn karaa in saamaynta iyo xoogga maaliyadeed ee Sucuudigu ku leeyahay dalxiiska adduunka ee nabdoon ay sii socon doonto. Hadda waxay fursad u tahay UNWTO cusub oo xoog leh, safar cusub oo caalami ah oo xoog badan, iyo warshadaha dalxiiska si ay uga soo baxaan dhibaatada hadda jirta.
Iyada oo Sacuudi Carabiya ku lug leedahay waxaa jiray rajo dalal badan oo ku tiirsan dalxiiska waqtiyada mustaqbalka mugdiga ah.
Sacuudi Carabiya ayaa laga yaabaa inay leedahay xikmad ay ku xalliso arrintan oo ay iskaashi la yeelato Spain. Waxaa laga yaabaa in labada dal oo wada jira ay ciyaari karaan kaalin lama huraan ah si dib loogu soo celiyo muhiimada, taagnaanta, iyo saameynta Ururka Dalxiiska Adduunka uu u baahan yahay inuu ka hago waaxdan si looga saaro masiibada.
María Reyes Maroto Illera (waxay dhalatay 19 Diseembar 1973) waa Wasiirka Warshadaha, Ganacsiga, iyo Dalxiiska ee Isbaanishka xukuumadda Raiisul Wasaare Pedro Sánchez ilaa 2018.
Wasiir Maroto ayaa loo arkayay in uu Spain ka liito. Wasiirka Dalxiiska ee Spain Reyes Maroto, oo la hadlay Raadiyaha Canal Sur Isniintii, ayaa soo jeediyay in qarxinta Folkaanaha ee La Palma ay tahay suuragalnimo soo jiidasho dalxiis oo cusub., ku dhiirri -geliya dadka soo booqda inay yimaadaan.
Maanta Lava oo ka timid foolkaantii La Palma waxay gaartay badda. Walaaca ugu weyn ee mas'uuliyiinta hadda waa daruuraha sunta ah ee gaari kara Jasiiradda Canary, oo ay abuurtay xiriir ka dhexeeya dhagaxa dhalaalay iyo badda.
Wadashaqayn guul/guul leh oo lala yeesho Sacuudi Carabiya ayaa hubaal ahaan sare u qaadi doonta wasiirka dalxiiska ee hadda Spain.
Maxay qaadan doontaa in la dhaqaajiyo UNWTO?
106 cod ayaa loo baahnaan lahaa si loo ansixiyo guuritaanka xarunta. Sida laga soo xigtay eTurboNews ilaha, ku dhawaad ​​90% codadkan ayaa hore loo hubiyay. Waxaa jiray taageero aad u weyn oo ka timid Afrika, dunida Carabta, laakiin sidoo kale Kariibiyaanka, iyo xitaa qaar ka mid ah waddamada Yurub ..
Maxaa Sacuudi Carabiya?
SAudi Arabia Qorshihiisa Istaraatiijiyadeed ee 2030 wuxuu leeyahay dalxiis oo ka mid ah saddexda ahmiyaddiisa.
Dhaxal sugaha Maxamed Bin Salmaan ayaa soo jeediyay in dalka tagaa laga bilaabo 1% ku biirinta dalxiiska ee GDP -ga qaranka ilaa 10% qorshe soconaya ilaa 2030.
Qorshahan ayaa waxaa fulinaya Wasiirka Dalxiiska Sacuudiga Axmed Al Khateeb.
Badhtamihii Sebtembar, Dawladda Isbaanishku waxay abaabushay booqashada xarunta mustaqbalka ee UNWTO ee Madrid, Palacio de Congresos de La Castellana.
Booqashada-General Pololikashvili ayaa ka soo qayb gashay booqashada laakiin markii dambe wuu ka badbaaday shirkii jaraa'id ee loo qorsheeyay wasiirada Reyes Maroto iyo José Manuel Albares. Ma uusan dhibin inuu ka qeybgalo warbaahinta ama inuu beeniyo wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan isbedelka xarunta iyo taageeradiisa Riyadh
Taasi waxay ahayd markii dawladda Isbaanishku go'aansatay inay toos u tagto UN.
Dhowr bilood ka hor, UNWTO waxay abaabushay madal ka dhacday dal ku yaal Koonfur Afrika si looga doodo talo -siinta sameynta summad dalxiis oo wadajir ah oo loogu talagalay waddamadaas.
Wakiilo ka socda 47 dal oo Afrikaan ah ayaa kulanka ka qeyb galay muddo saddex maalmood ah. “Halkaas xoghayaha guud wuxuu awooday inuu si gaar ah ula hadlo dhammaantood, iyo markhaatiyaal ka yimid qaarado kale.
Lacagtii ay Sacuudigu doonaysay inay ku fuliso hawlgalka ayaa aad ugu fiicnaan lahayd dhammaan mashaariicda socdaalka iyo dalxiiska ee dalalkaas.
Xiriirka ka dhexeeya Spain iyo UNWTO marna ma ahayn mid gaar ah laakiin wuxuu ahaa mid hagaagsan, sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay warbaahinta ganacsiga Isbaanishka. Si kastaba ha ahaatee Spain ayaa u codeysay Zurab oo ka soo horjeeda musharaxnimada kale oo uu ku jiro xoghaye ku xigeenka Isbaanishka. ”
Xaqiiqda haysashada xarunta UNWTO ma aha mid ka dhigaysa Spain caasimadda dalxiiska adduunka, taas oo ka soo horjeedda waxa ay dadka qaar rabeen inay arkaan.
"Dowladda Isbaanishku si dhib leh uma oga in biilka xarunta si otomaatig ah loo bixiyo bil kasta oo aysan jirin cid ogaata marka laga reebo sarkaalka amraya wareejinta bangiga, oo wali ah mid otomaatig ah." Spain waxay bixisaa qarashka xarunta UNWTO. Waxaas oo dhan waxay Spain ku kacdaa qiyaastii 2 Milyan oo Euro sanadkii.
The Xoghayaha Guud ee UNWTO ayaa eedaynaya oo la mid ah Ururka Shaqaalaha Adduunka (ILO) iyo Agaasimaha Guud ee Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay (UNDP): $ 20,000 bishiiba 12 lacag-bixin bishii = $ 240,000. Waxa kale oo uu sannadkii qaataa € 40,000 guri iyo baabuur iyo darawal. Xoghayaha guud waxaa bixiya UNWTO, ma aha Spain.
Waxa waddan walba uu bixiyo si uu xubin uga noqdo UNWTO waxay ku xiran tahay GDP -ga, tirada dadka, iyo cuntooyinka dalxiiska ee ay khuseyso. Lacagtaasi ma dhaafi karto 5% miisaaniyadda ururka.
Dalalka lacagta ugu badan bixiya ayaa ah Faransiiska, Shiinaha, Japan, Jarmalka, iyo Spain, kuwaas oo midkiiba ku bixiya 357,000 oo Euro sanadkiiba. Kuwa ugu lacagta yar waa Seychelles iyo Samoa, oo sanadkii laga qaadayo 16,700 euro.
UNWTO waxay qiimo aad u yar u keentaa warshadaha dalxiiska iyo meelaha loo safro. Si liidata ayaa diirada loo saaray, iyada oo aan la hayn miisaaniyad -12 milyan oo doollar sannadkii, taas oo 60% ay ku baxdo mushaaraadka-, iyada oo masuuliyiin ay magacaabeen dalalkeedu. Musuqmaasuqa gudaha iyo fadhiidnimada iyo dhaqamadii hore ee duugoobay ayaa waligood ahaa arrin.
UNWTO hadda waxay leedahay 159 xubnaha. Qaramada Midoobay waxay leedahay 193 xubnood oo waddan ah.
Mareykanka wuxuu ka baxay UNWTO 1995, Belgium 1997, UK 2009, Canada 2012, Australia 2014.
Sidoo kale, maqnaanshaha ayaa ah Ireland, Qubrus, New Zealand, Luxembourg, iyo dhammaan waddamada Waqooyiga Yurub: Iceland, Norway, Sweden, Finland, iyo Denmark, oo lagu daray laba dal oo Baltic ah, Estonia iyo Lithuania ayaa UNWTO ka dhiga urur daciif ah.
Waxaa cad in jihada cusub ee UNWTO ay muhiim u tahay hay'addan ku xiran Qaramada Midoobay si ay u noolaato.
Illaa iyo hadda Sacuudi Carabiya ayaa ka jawaabtay UNWTO iyo Dalxiiska Adduunka guud ahaan sida dal kale oo adduunka ah. Waxaa jiri doona talaabo xigta, taasi waa hubaal.